सिरहा, ७ चैत्त । जिल्ला निकासीको नाममा मनपरी गर्दै आएपछि पूर्वाञ्चलका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको निर्देशनमा ठेक्का बन्द भएको एक बर्षपछि फेरी रकम असुली गर्न थालेको छ ।
जबर्जस्ती कर असुली गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले पूर्वाञ्चलका डिआइजीलाई जानकारी गराएपछि ठेक्का नै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्रहरीले ठेकेदारलाई लगभग एक बर्षदेखि जिल्ला निकासी कर उठाउन दिएका थिएन् । प्रहरीले ठेकेदारमाथि सार्वजनिक मुद्दासमेत चलाएको थियो ।
यता, जिविसले केही दिनदेखि आफ्नै कर्मचारी लगाएर कर असुली गरिरहेको छ भने उनीहरुलाई सहयोग गर्ने पूर्व केही ठेकेदारहरु लागीपरेका छन् । यसवारे जिल्ला विकास समिति सिरहाका उर्जा तथा वतावरण अधिकृत इन्जिनियर रमेश निधीसंग सम्पर्क गर्दा जबर्जस्ती र दोहोरो कर लिएमा कारवाही मात्रै होइन् मुद्दा चलाए पनि हुन्छ । उनले भने कारबाही गर्न नसके मात्र प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न मिल्छ बताउंछन् ।
यसअघि सलमान तयारी पोसाक लहान–७ संग गत भदौ ९ गते रु एक करोड ५५ लाख ५५ हजारमा यस वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि जिविस सिरहाले जिल्ला निकासी कर सङकलन गर्न दिने भनी ठेक्का लगाउने सम्झौता गरेको थियो ।
जबर्जस्ती र दोहोरो कर उठाएको कारण प्रहरीले ठेक्का रोकेपछि ठेकेदार र जिविस समस्यामा परेको छ । ठेकेदार अर्थात् सलमान तयारी पोसाकका मालिक असलम हुसैन भने पहिले देखि चल्दै आएको सिस्टम अनुसार चलाउंदै आएका थिए ।
यसैबीच, सवारी तथा यातायात पटके करको वीलमा जिविसको छाप समेत नरहेको र मनपरी ढंगले रकम असुली गरिररहेको खुलासा भएको छ । एस.एच.ए. निर्माण सेवा लहान (सिरहा) ले जिप नं. ८३५९ लाई रसिद काट्दा ३ सय २० रुपैयां लिएको थियो । यसवारे जिविसका तीन उच्च कर्मचारीलाई सो बील देखाउंदा एक कर्मचारीले ढाकछोप गर्ने प्रक्रियामा लागे भने दूई कर्मचारीले कारवाही गर्छु भन्दै बीलको फोटो मोबाइलमा लिनुभयो ।
हालसम्म कुनै कारवाही नभएपछि रकम असुलीमा दुधको साक्षी विरालो जस्तै भएको छ । सो बील भारतीय जीपको चैत्त २३ गते काटिएको थियो ।